Sorona Masina ny 14/10/2021 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 14/10/2021
Efez. 1, 1. 3-10
Nifidy antsika tao aminy talohan’ny nahariana izao tontolo izao Izy.
Ry kristianina havana, i Paoly Apôstôlin’i Jesoa noho ny sitrapon’Andriamanitra dia mamangy ny olona masina, mbamin’ny mpino ao amin’i Kristy. Hisaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika, izay nitso-drano antsika tao amin’i Kristy, amin’ny tso-drano rehetra ara-panahy any an-danitra, sy nifidy antsika tao aminy talohan’ny nahariana izao tontolo izao mba ho masina sy tsy manan-tsiny eo anatrehany isika, ary nanendry antsika rahateo tamim-pitiavana araka ny sitraky ny Fony, mba ho zanaka hatsangany amin’ny alalan’i Jesoa Kristy isika; nampamirapirata ny voninahitry ny fahasoavany izany, dia ny fahasoavany nanasoavany antsika ao amin’Ilay malalany. Izy no ahazoantsika ny fanavotana amin’ny Rany, sy ny famelana ny fahotantsika, araka ny haben’ny fahasoavany, izay nomen’Andriamanitra be dia be ho antsika tamin’ny fahendrena amam-pahalalana rehetra, fa nampahafantariny antsika ny lahatra lalin’ny safidim-pony, izay nofidin’ny hatsaram-pony hotanterahiny, rahefa feno ny andro: dia ny hanakapohana ny zavatra rehetra ho iray ao amin’i Kristy, na ny any an-danitra, na ny etý an-tany.
Salamo 97, 1. 2-3ab. 3de-4. 5-6
Ihirao antsa vao ny Tompo fa mahagaga ny zava-bitany. Fa ny tanany no namonjy, nanampy Azy ny herin-tsandriny.
Ka dia hitan’ny firenena ny famonjena amam-pahamarinany. Mba tsarovy, ry Israely ilay fitiavany tsy mivadika.
He zahao e, ry vazan-tany izato vonjin’Andriamanitra. O, ry tany, derao ny Tompo ka mientàna amin-karavoana.
‘Ndao, antsao am-baliha ny Tompo, anaovy antsa sy fihobiana. Feon’antsiva sy anjomara enti-midera ny fiandrianany.
Rôm. 3, 21-30
Ny finoana no anamarinana ny olona fa tsy ny asan’ny Lalàna.
Ry kristianina havana, ankehitriny, tsy amin’ny lalàna, dia naseho ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra, izay nambaran’ny Lalàna sy ny Mpaminany, dia fahamarinana avy amin’Andriamanitra, noho ny finoana an’i Jesoa Kristy, ho an’ny mpino rehetra; satria tsy misy avaka, fa samy efa nanota ihany izy rehetra, ka tsy manana ny voninahitr’Andriamanitra, fa hamarininy maimaim-poana amin’ny fahasoavany noho ny fanavotana izay ao amin’i Kristy Jesoa. Fa Izy no natsangan’Andriamanitra am-pahibemaso ho sorom-pifonana amin’ny rany noho ny finoana, mba hampiharihary ny fahamarinany noho izy tsy dia namaly loatra ny fahotana fahiny tamin’ny andron’ny fandeferany, dia hampiharihary ny fahamarinany Izy amin’ny andro ankehitriny, mba ho hita ho marina sady manamarina izay manam-pinoana an’i Jesoa. Koa aiza ary no hireharehana? Efa nofoanana izany; fa tamin’ny lalàna inona? Tamin’ny lalàn’ny asa va? Tsia, fa tamin’ny lalàn’ny finoana; satria miaiky marina isika fa ny finoana no anamarinana ny olona, fa tsy ny asan’ny Lalàna. Sa Andriamanitry ny Jody ihany Andriamanitra, fa tsy mba Andriamanitry ny Jentily koa? Eny, Andriamanitry ny Jentily koa Izy, satria Andriamanitra iray ihany no hanamarina ny voafora amin’ny finoana, sy ny tsy voafora amin’ny finoana koa.
Salamo 129, 1-2. 3-4b. 4d-6
Fiv.: Fa hatsaram-po no ao amin’ny Tompo ary fanavotana lehibe.
Avy ato anaty hantsana aho, ry Tompo, no miantso. Tompo ô, henoy izany feoko. Ho tandrin-tsofinao anie ny antsoko miangavy. He! fa mitoreo izato feoko.
Raha tsikilovinao irony heloka natao, zovy re, ry Tompo, no haharitra? Saingy eo anilanao no hahitako famelana. Toky ho ahy Ianao, ka dia toaviko.
Ny Tompo no antenain’ny fanahiko hatrany, vonona aho miandry izany teniny. Manoatra ny mpiambina miandry ny maraina, no aoka hiandrasantsika an’Andriamanitra.
Ampianaro ahy, ry Tompo ny lalanao, ary tariho ho amin’ny lala-mahitsy aho.
Lk. 11, 47-54
Hampamoahina azy ny ran’ny mpaminany, hatramin’ny ran’i Abela ka hatramin’ny ran’i Zakaria.
Tamin’izany andro izany, i Jesoa niteny tamin’ny Farisianina sy ny nipanora-dalàna nanao hoe: “Loza ho anareo, fa manao fasana ho an’ny mpaminany ianareo, kanefa ny razanareo ihany no namono azy! Koa mitsangan-ko vavolombelona sy mpankasitraka ny nataon’ny razanareo ianareo, fa izy moa namono ny mpaminany, ianareo kosa manao fasana ho azy. Izany no nanaovan’ny fahendren’Andriamanitra hoe: “Haniraka mpaminany sy Apôstôly ho any aminy Aho, ka ny sasany hovonoiny ary ny sasany hoenjehiny, mba hampamoahina an’itý taranaka itý avokoa ny ran’ny mpaminany rehetra izay nalatsaka hatramin’ny nahariana an’izao tontolo izao. Dia hatramin’ny ran’i Abela ka hatramin’ny ran’i Zakaria izay novonoina tanelanelan’ny ôtely sy ny tempoly.” Eny, lazaiko aminareo fa hampamoahina an’izany tokoa itý taranaka itý. Loza ho anareo, ry mpampianatra ny Lalàna, fa nalainareo ny fanalahidin’ny fahalalana, ka ianareo tsy niditra, ny te-hiditra nosakananareo.” Raha mbola niteny izany Izy, dia nododonan’ny Farisianina sy ny mpanora-dalàna, ary nozezehany fanontaniana maro, mba hamandrihany Azy sy hahazoany vava latsaka hiampangana Azy.